Geeska Afrika – Geelle Mag
Home » Geeska Afrika
Geeska Afrika / Warar
Askar ciidamada Puntland ka tirsan ayaa ku dhintay weerar Alshabaab ku qaaday Af-urur
Waxa la xaqiijiyey dhimashada saddex Askari oo ka tirsan ciidanka ilaalada buuraha Galgala kadib dagaal dhex maray iyaga iyo kooxda Alshabaab ee ka dagaalanta aagaaas. Wararka ayaa sheegaya in deegaanka Af-urur ee galbeedka magaalada Bosaaso ayaa inuu dagaal halkaasi ku […]
Xaalada ammaanka Bossaso oo kacsan
Kadib markii ciidamo beeleed ay xoog ku galeen magaalada Bossaso maalintii Talaadada ayaa waxa sii badanaya cabsi dagaal inuu ka qarxo magaalada gudaheeda. Waxa dawladdu ciidamo ku daabushay magaalada halka maleeshiyo beelaad ku samaystay dhufayso qaybo ka mid magaalada gudaheeda. […]
Geeska Afrika / Sawiro / Warar
Sawiro: Kenya iyo Soomaaliya oo xidhiidhka si joogta usoo ceshtay
Staff Reporter Posted On November 14, 2019
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Kenya ayaa markii ugu horeysay kulmay iyada oo aan cid dhexaad u ahay xilli Kenya iyo Soomaaliya muran biyoodka baddu oo khilaaf diblamaasiyadeed oo aad u balaaran ka dhex abuuray labada wadan. kulanka ayaa ka dhacay […]
Madaxweynaha Soomaaliya oo Kenya la kulmay